Huawei P9, nyocha mgbe ọnwa isii gachara | Gam akporosis
Huawei P9, nyocha mgbe ọnwa isii gasịrị
El Huawei P9 bịara n'ahịa na ebumnuche nke ịwakpo ihe kachasị dị na mpaghara ahụ, ruo ugbu a Samsung, LG, Sony na HTC na-achịkwa. Mana Huawei chọrọ ịgbanwe ihe na, mgbe ọnwa isii gachara, agwala m gị na anyị nwere ike ichefu banyere ekwentị ndị ahụ dị otu nzọụkwụ n'okpuru n'akụkụ ụfọdụ.
Ekpebiri m ịkụ nzọ Huawei mgbe ọ nwalechara ya n'oge ngosi na London. Mmetụta mbụ ahụ dị mma nke mere m kpebiri ịkụ nzọ na ekwentị a Huawei P9 bụ ezigbo ọnụ ahịa na, na-echebara nke ahụ echiche ọ na-efu ugbu a ihe na-erughị euro 500 na AmazonỌ bụ nhọrọ kachasị mma ma ọ bụrụ na ị na-achọ ekwentị dị elu na ọnụahịa ahụ. Enweghị m oge ọzọ, ahapụrụ m gị nyocha nke Huawei P9 mgbe o jiri ya ọnwa isii.
1 Huawei P9 nwere ihe mara mma mara mma nke na-agbaso usoro nke ndị nrụpụta setịpụrụ
2 Ọnụ dị ike na elu nke ekwentị kacha mma na ahịa
3 Ihuenyo nke na-akwado ya, mana na-enweghị nguzo
4 Igwefoto dị ịtụnanya nke na-enye nnwale dị egwu
4.1 Ihe nlere nke foto ndi ejiri ese foto Huawei P9
5 Batrị nke na-emeju ihe zuru ezu na-enye ezigbo nnwere onwe
Huawei P9 nwere ihe mara mma mara mma nke na-agbaso usoro nke ndị nrụpụta setịpụrụ
Onye ohuru nke Huawei's P family kwụpụtara maka ogo ya. N'ụzọ dị otú a, Huawei P9 nwere ahụ dị iche iche nke emere na aluminom egbu maramara na parte azụ nke na-enye ya nnukwu adịchaghị.
Anyị agaghị ahụ otu plastik dị n'ahụ ya, ebe ọ bụ na onye nrụpụta ejirila usoro yiri nke a hụrụ na iPhone ikpeazụ ma ọ bụ na HTC 10 nke mere na antenna nke ekwentị anaghị enwe nsogbu na ozu Huawei P9. .
Richard Yu, CEO nke Huawei, kwuru n'oge ngosi ahụ ika a rụsiri ọrụ ike iji mepụta smartphone nwere ezigbo ngwụcha na àgwà nkọwa. Can ga - ahụ na Huawei lebara anya na nkọwa ikpeazụ nke ekwentị ọhụụ.
Ka anyị kwuo banyere ihu Huawei P9. Ekwentị nwere nchebe Corning Gorilla Glass 4 nke ga - egbochi ihuenyo ka ọ ghara ịdaba na ọdịda ọjọọ. M na-agwa gị na mgbe ọnwa isii nke ojiji Huawei P9 ahapụla m ugboro ole na ole ma ọ nweghị ahụhụ ọ bụla.
Echetara m na ụjọ pụrụ iche otu mgbe m na-amị amị ma si n’ebe dị elu dị ihe dị ka amaụkwụ ise daa na-ada na akụkụ nke ihuenyo ahụ na ala. Echere m na ọ bụ ngwụcha na na ọ ga-agbasasịkwa n'ime otu puku iberibe, ma ọ nweghị ihe nwere ike ịga n'ihu n'eziokwu ahụ ebe ọ bụ na ihuenyo ahụ ka dị.
Naanị ihe a na-ahụ anya bụ na igbe aluminom na n'azụ ebe enweres nta akara, ihe dị nnọọ nkịtị na-ewere na anaghị m eji ụdị mkpuchi ọ bụla ma ha anaghị ele anya nke ukwuu nke mere na imepụta na ọdịdị ka dị egwu. Ekwesiri ighota na akuku Huawei P9 gbara gburugburu na-ekwe ka ekwentị jidere ya nke oma, na-enwe mmetuta di nma.
Huawei P9 nwere a 5.2 anụ ọhịa ahụ na ihuenyo. N'agbanyeghị nke a, ọ nwere oke ejidere oke, 145 x 70.9 x 6.95 mm, na-eme ka onye ọhụụ ọhụrụ nke ezinụlọ P bụrụ otu n'ime obere ọdụm dị na ahịa. Tụkwasị na nke a, gram 144 ya dị arọ na-eme ka P9 dị mfe ma dị mma iji rụọ ọrụ.
Ọtụtụ n'ime uru nke obere obere ya dị na obere akụkụ osisi nke Huawei P9, na-ebi na ihuenyo ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 73% nke ihu dum, nnukwu ihe ịga nke ọma. N'akụkụ nke elu nke ihu dị igwefoto, ihe mmetụta ọkụ na igwe okwu nke ekwentị ahụ, ebe n'akụkụ ala anyị na-ahụ akara ngosi nke ika ahụ. Ọ bụ ihe ihere na integra ike iwebata okpukpu abụọ n'ihu okwu dị ka el Huawei P9 gbakwunyere.
N'ebe a, m ga-akatọ ọnọdụ nke ọkà okwu nke na-akpọ anyị ka anyị kpuchie ya n'amaghị ama mgbe anyị na-egwu egwuregwu. Ihe na - eme na ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ọnụ na nke nwere nsogbu siri ike ma ọ bụrụ na agbatịghị ọnụ nke ọnụ iji jikọta ha na akụkụ ihu.
Ka anyị gaba na azụ. Na elu ebe bụ igwefoto abuo nwere ihe omuma Leica. Igwefoto Corning Gorilla Glass 3 kpuchiri igwefoto niile ma kpuchie ya na ogwe aka ya nile, ya mere enweghi ihe ojoo nke iwe ojoo nke otutu igwe na-enwe.
Naanị n'okpuru igwefoto bụ ebe Huawei jikọtara ya ihe mmetụta mkpisi aka. Onwe m, enwere m mmasị na ọnọdụ nke onye na-agụ biometric, ọ bụ ezie na e nwere ndị na-ahọrọ ya ka ọ dịrị na ihu ekwentị. Maka ihe uto, agba.
N'akụkụ aka nri nke Huawei P9 anyị ga-ahụ igodo njikwa olu, na mgbakwunye na bọtịnụ na-agbanye na nkwụsị. Otu nkọwa zuru oke na njedebe nke onye nrụpụta Asia na-amasị m ọtụtụ bụ bọtịnụ ike nwere oke njiri mara na-enye gị ohere ịmepụiche ya na igodo ndị ọzọ n'ụzọ dị mfe. Mkpọchi ahụ na-enye nguzogide nrụgide dị mma na ụzọ karịrị ụzọ ziri ezi.
N'ebe dị elu dị ọcha kpamkpam anyị ga-aga n'ihu ikwu maka akụkụ aka ekpe. Nke a bụ ebe Huawei tinyela oghere kaadị Nano SIM yana microSD. N'ikpeazụ anyị nwere akụkụ ala nke bụ ebe njikọ ahụ dị USB Cdị C na ihe ntinye 3.5 mm iji jikọọ ekweisi, na mgbakwunye na ọkà okwu nke Huawei P9, nke na-ada ụda nke ọma.
Imewe ahụ na-amasị m ma mgbe ọnwa isii nke ojiji m nwere ike ikwu na ọ dị ezigbo mma ma nwee njikwa. Na mgbakwunye, eziokwu ahụ bụ na m diri ọtụtụ nsogbu dị egwu na-eme m ezigbo obi ụtọ n'akụkụ a na Huawei P9.
Ọnụ dị ike na elu nke ekwentị kacha mma na ahịa
Ihuenyo 5'2 "IPS nwere teknụzụ 2.5D yana mkpebi 1920 x 1080 HD na-eru 423 dpi na Corning Gorilla Glass 4 nchedo
Nhazi HiSilicon Kirin 955 (ihe anọ 72 GHz Cortex-A2.5 cores na cores 53 GHz Cortex-A1.8)
RAM 3 GB ma ọ bụ 4 GB ụdị LPDDR4 dabere na ihe nlereanya ahụ
Nchekwa n'ime 32 ma ọ bụ 64 GB gbasaa site na MicroSD ruo 128 GB dabere na ụdị a
Igwefoto na-aga n'ihu 12 MPX nwere igwefoto igwefoto Leica abụọ / autofocus / nchọpụta ihu / panorama / HDR / Dual LED flash / Geolocation / 1080p ndekọ vidiyo na 30fps
Njikọ DualSIM Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / dual band / Wi-Fi Direct / hotspot / Bluetooth 4.0 / FM redio / A-GPS / GLONASS / BDS / GSM 850/900/1800/1900; Ndị 3G (HSDPA 850/900/1900/2100 - VIE-L09 VIE-L29) 4G band (band 1 (2100) 2 (1900) 3 (1800) 4 (1700/2100) 5 (850) 6 (900) 7 (2600) 8 (900) 12 (700) 17 (700) 18 (800) 19 (800) 20 (800) 26 (850) 28 (700) 38 (2600) 39 (1900) 40 (2300) 41 (2500) ) - Lee - L09)
Atụmatụ ndị ọzọ Metal ahụ / mkpisiaka ihe mmetụta / accelerometer / gyroscope / ngwa ngwa odori usoro
Akụkụ X x 145 70.9 6.95 mm
Ibu ibu 162 grams
Ahịa 495 euro na Amazon
Huawei bụ onye mbụ rụpụtara jiri ihe ngwọta ya. Usoro ya nke ndị na-arụ ọrụ HiSilicon Kirin na-enye ezigbo arụmọrụ na Huawei P9 na-etinye ọla ya na okpueze: the ike Kirin 955. Kirin 955 a bu ntoputa nke 950, ya na cores asatọ (isi Cortex A72 anọ rutere 2.5 GHz nke ọsọ elekere, yana isi anọ Cortex A53 anọ ọzọ na 1.8 GHz nke ike).
Na nke a anyị ga-agbakwunye a n'ezie dị ike ndịna nhazi nhazi, anyị na-ekwu okwu banyere ARM Mali T880 MP4 GPU nke na-anapụta ihe karịrị oke inye ezigbo arụmọrụ. Site na ihuenyo dị elu ọ nwere ike ịbụ ntakịrị mkpụmkpụ, mana ọ bụrụ na anyị echee na Huawei P9 nwere panel nke ruru mkpebi HD zuru ezu, GPU a ezughị oke.
N’oge niile m na-eji ekwentị achọpụtaghị m oge adighi lag na interface ugbu a. Enweela m ike igwu egwuregwu dị iche iche chọrọ nnukwu ego na arụmọrụ nke Huawei P9 nyere nke ọma, na-enye m ohere ịnụ ụtọ egwuregwu ọ bụla n'agbanyeghị agbanyeghị nsogbu ọ na-enweghị nnukwu nsogbu.
Versiondị nke m nwere ngalaban 3 GB nke DDR4 RAM na 32 GB nke nchekwa dị n'ime, nke ihe dị ka 25 GB n'efu maka onye ọrụ. N'ọnọdụ ọ bụla, Huawei P9 nwere oghere maka kaadị Miro SD nke na-enye anyị ohere ịbawanye ikike ya ruo 256 GB, yabụ na ị gaghị echegbu onwe gị maka akụkụ a.
Otu nkọwa m masịrị m bụ nke ahụ ekwentị anaghị ekpo oke ọkụTụle ụdị ọla ya bụ ihe m nwere ekele. M na-eji ya na gburugburu ebe dị iche iche, ụbọchị anwụ na-acha n'ụsọ osimiri dịka ọmụmaatụ, enwebeghị m nsogbu ọ bụla na nke a. A ga-atụ anya na njedebe dị elu na-arụ ọrụ zuru oke, mana enwere m ekele dị ukwuu na EMUI 4.1 bụ interface mmiri dị otú ahụ.
Ma nke ahụ bụ na Huawei P9 na-arụ ọrụ Android 6.0 n'okpuru nsụgharị ọhụrụ nke Huawei omenala oyi akwa. EMUI ọ na-adabere na desktọọpụ, karịa iji sistemụ ngwa ngwa a na-ahụkarị na ekwentị ndị ọzọ. Mụ onwe m jiri usoro gị mee ihe ngwa ngwa ka m wee ghara ikwu ihe ọ bụla banyere ya.
Ihuenyo nke na-akwado ya, mana na-enweghị nguzo
Na mbu enwere m ndakpọ olileanya na Huawei P9 enweghị ngosipụta 2K. Agbanyeghị n'eziokwu, ọ bụrụ na ịchọghị ịbanye n'ụzọ zuru oke n'ụwa nke mebere eziokwu, echere m na site na ihuenyo 1080p ị nwere ihe zuru oke. N'ụzọ dị otú a, ekwentị ọhụrụ nke ndị na-emepụta Eshia nwere ihuenyo guzobere site na a 5.2-inch IPS panel nke na-enye ezigbo arụmọrụ dịka ị nwere ike ịhụ na review na vidiyo
Ekwentị na-enye nkọwa doro anya na mgbakwunye inwe magburu onwe ikiri n'akuku nke ahụ na-enye gị ohere ilele ọdịnaya dị na gburugburu ebe obibi ọ bụla, ọ gbasaghị ma ọ bụrụ na anwụ na-acha ụbọchị anwụ, n'akụkụ ahụ Huawei P9 agaghị ada gị. Ọ bụ ezie na m ga-ekwu na ọkwa nchapụta ya adịghị oke oke, kama ọ bụ na nkezi.
Otu akụkụ nke anaghị amasị m bụ na n'oge anwụ na-acha, ebe ihuenyo na-enweta ọtụtụ ìhè, ọ na-ewe oge iji dozie nchapụta ahụ. Enweela m iji aka na-eme ya mgbe nke a mere, mana ọ na-ewute m na ọ na-ewe ogologo oge iji gbanwee akpaghị aka.
Ekwesiri ighota na ngwanrọ nke jikọtara Huawei P9 ga-enye gị ohere ịgbanwe agba agba nke ihuenyo. Ma kpachara anya, ọ bụghị naanị na anyị nwere ike ịhọrọ okpomoku ma ọ bụ oyi karịa, mana anyị nwere ike ịhọrọ oke agba agba site na ogo ya. A zuru ezu na ihe ndị kasị purist ọrụ ga-ekele. Ọ bụ ezie na mụ onwe m na-atụ aro ịhapụ agba nke ihuenyo dị ka ọ bụ ebe ọ bụ ọkwa kachasị edozi na ahụmịhe m.
Ezi ihuenyo mana nke ahụ, dịka m kwuru, anaghị apụ apụ ma e jiri ya tụnyere ndị na-asọmpi ya na mpaghara kachasị elu na mpaghara ahụ. N'ezie, ọ ga-karịa atụmanya nke ọ bụla onye ọrụ, echegbula na Ihuenyo nke Huawei P9 agaghị emechu gị ihu.
Igwefoto dị ịtụnanya nke na-enye nnwale dị egwu
Ngwa, Huawei P9 abụghị ekwentị izizi iji sistemu igwefoto abụọ. Anyị ahụworị ya na ọdụ ndị ọzọ dị ka el ZTE Axon J.Randall, ma Huawei ejiriwo ya mee ihe n'ụzọ dị iche. Nsonaazụ ahụ enweghị ike ka mma.
Maka nke a, onye nrụpụta ahụ esorola Leica jikọọ igwefoto abụọ nke Huawei P9 dlẹ mgboko Leica Nchịkọta H 1: 2.2 / 27 ASHP. Nwere ike ịchọpụtala na oghere f / 2.2 pere mpe, karịa ma ọ bụrụ na anyị jiri ya tụnyere igwefoto ndị ọzọ dịka Samsung Galaxy S7 ma ọ bụ LG G5. M na-agwa gị na, na-enweghị iru ọkwa nke abụọ ndị a, Huawei P9 nwere otu n'ime igwe foto kachasị mma n'ahịa
Ma ọ bụ na igwefoto abụọ nke Huawei P9 nwere ihe mmetụta Sony IMX286 abụọ, nke mbụ n'ime ihe abụọ a na-enweghị nzacha nke Bayer, nke bụ nke na-agbakwunye agba na mbiet ahụ. Site na usoro ihe a, ihe mmetụta monochrome Naanị ya na-esepụta okpokolo agba na oji ka o wee weghara nkọwa karịa agba agba.
Dika ihe mmetụta monochrome a gha achota oku n’itinyeghi uche na agba ya, oru ya kariri nke ihe omuma. Ihe akaebe nke a bụ na ihe mmetụta ya kwere jide 270% karịa ìhè karịa ihe mmetụta ot, na mgbakwunye na ịrụ ọrụ ngwa ngwa karịa ndị na-asọmpi ya.
Na mgbakwunye na ịmịkwu ọkụ, igwefoto abụọ nwere ihe mmetụta Leica na-ejikọ Huawei P9 na-enye ohere were foto gbadoro anya na ozugbo, na -emepụta mmetụta Bokeh emezuru n'ezie. N'ezie, ọ bụghị ezigbo foto, mana ịme anwansị mere maka sọftụwia igwefoto dị ike nke Huawei P9. Emeela m ọtụtụ ule na nsonaazụ nnwale ahụ dị ezigbo mma.
Ga-enwe ike inyochapụta na el nyocha vidiyo na àgwà nke njide nke Huawei P9 igwefoto dị mmas Akụkụ nke akwụmụgwọ na-abịa na sọftụwia siri ike nke na-ejikọ ekwentị ma na-enye ọtụtụ ohere na-atọ ụtọ.
Karịsịa ihe kwesịrị ịrịba ama bụ ọnọdụ ndị ọkachamara ga-enye gị ohere ịgbanwe ụdị dịgasị iche iche, dịka ISO ma ọ bụ ọsọ ihu, na-enye gị ohere ịse foto ọkachamara.
Anyị enweghị ike ichefu ọnụọgụ nhọrọ nhazi dị ukwuu, na mgbakwunye na ụdị HDR a maara nke ọma, ịma mma, monochrome, agba abalị, nwayọ nwayọ ... Foto dị n'ụdị RAW! Ghara ikwu banyere Leica nzacha nke na-enye mgbakwunye na foto ndị ejiri ya na Huawei P9.
Echegbula onwe gị, ịnwere ike itinye igwefoto na ọnọdụ akpaka iji see foto ngwa ngwa na ngwa ngwa, ọ bụ ezie na ọ bara uru ịmụ ntakịrị ohere nke igwefoto Huawei P9, n'ihi na ha ga-eju gị anya.
Ihe nlere nke foto ndi ejiri ese foto Huawei P9
Batrị nke na-emeju ihe zuru ezu na-enye ezigbo nnwere onwe
The Huawei P8 abụghị ihe kasị mma ọnụ na okwu nke nnwere onwe na emeputa chọrọ iji dozie a ọdịda na ya nọchiri. Iji malite, P9 nwere batrị nke na-aga site na 2.600 mAh nke ụdị gara aga iji nweta ego 3.000 mAh n’enweghị ahụ na-ata ahụhụ site na ịba ụba nha ya.
Na mgbakwunye, Huawei P9 nwere dị iche iche ụdịdị nke ga-eme ka anyị nwekwuo batrị ma ọ bụ obere karịa. Dịka ọmụmaatụ enwere ọnọdụ ịrụ ọrụ nke ga-eme ka P9 gaa dị ka mgbọ. Chọrọ ịchekwa batrị? rụọ ọrụ Ọnọdụ ROG, nke na-ebelata mkpebi na 720p ma ị ga-enwe ọtụtụ nnwere onwe.
Ejirila m ọrụ a rụọ ọrụ nke ukwuu, ọkachasị mgbe m chọrọ igwu ma ọ bụ lelee ọdịnaya nke ọdịnaya m na-etinye ọnọdụ arụmọrụ, ebe ọ bụrụ na m ga-eji Huawei P9 gụọ, ọ bụrụ ndị nta akụkọ, akwụkwọ ma ọ bụ ozi ịntanetị na-echere, na-arụ ọrụ. ọnọdụ ROG M jisiri ike mee ka m n'abalị na nkezi nke 30-35% batrị.
M nnọọ ụtọ nke na-enye nkọwa nke oge ihuenyo na ebe ọ bụ na ọ dịgasị ọtụtụ dabere na ojiji ị nyere ya, mana ọ diri m nkezi nke 6 awa mma m obi dị m ụtọ na nke a.
Mara kwa na Huawei P9, nke nwere pịnye C njikọ, nwere usoro ngwa ngwa nke ya nke ga - enyere anyị aka N'ime ọkara elekere, anyị ga-akwụ ụgwọ 40%, 70% n'ime otu awa na elekere abụọ anyị ga-akwụ ụgwọ Huawei P9 zuru ezu. Ihe ngwọta Quick Charge na-amasị m ka mma karịa, nke dị ọsọ ọsọ karị, mana inwe ike ịkwụ ụgwọ 3.0% nke ọnụ na ọkara elekere zọpụtara m karịa ihe karịrị otu nsogbu.
Na nkenke, ọ bụ ezie na nnwere onwe ya adịghị iche na ihe anyị na-ahụ na ekwentị ndị ọzọ dị elu, yabụ enwere m ike ikwu nke ahụ Huawei P9 gafere agba na nke a, na-ekwenye na ọ gaghị ahapụ anyị ka anyị tọrọ atọ n'oge kachasị njọ.
Mmetụta m nwere na Huawei P9 dị ezigbo mma. Ekwentị na-eguzogide ọgwụ nke nyere m ohere iji ya na-enweghị mkpuchi maka ọnwa isii, nwere njirimara mara mma na njirimara teknụzụ nke m nwere ike ịnụ ụtọ egwuregwu ọ bụla, n'ihi ọtụtụ chọrọ m jụrụ na-enweghị nnukwu nsogbu, ha na-akwado na nzụta gị karịrị ihe ịga nke ọma.
Ọ́ bụrụkwanụ na akụkụ ụfọdụ agbanwee? Otu ihe ahụ bụ okwu okwu, nke ọ bụ ezie na ọnọdụ ya dị ezigbo mma na-eme ka anyị kpuchie ya n'amaghị ama n'ọnọdụ ụfọdụ, mana enweghị m ihe ọ bụla ịkatọ. Dịkwa mma, ee, Huawei P9 enweghị FM Radio Ma obu isi okwu na ewe m iwe nke ukwuu ebe m si n’ulo akwukwo ochie ma na acho m inweta ihe a. Ee, enwere sistemu dị n'ịntanetị, mana echere m na mgbawa FM ekwesịghị ịbụ nnukwu ma ekwentị niile kwesịrị ịnwe nhọrọ a dịka ọkọlọtọ.
Ma n'ikpeazụ, ndị Huawei P9 ahapụwo m ezigbo uto n'ọnụ m ịbụ ihe ịga nke ọma na ịtụ aro zuru ezu. Ọ bụrụ na ị na-achọ igwe dị elu dị ọnụ ala, egbula oge, Huawei P9 agaghị emechu gị ihu. Kwere nkwa.
Ọnụahịa dị ala karịa ndị na-asọmpi ya
O nweghi redio FM
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Huawei P9, nyocha mgbe ọnwa isii gasịrị
nkà na ụzụ onye ofufe dijo
Elere m anya n'ọtụtụ nyocha nke Huawei p9 na Samsung s7. Ma o nwere obi abụọ, enwere m mmasị na atụmatụ nke Huawei p9, enwere m mmasị na ọ bụ sim sim. Ebe a na mba m Samsung naanị abịa na a otu sim. Ugbu a ihe kachasị amasị m bụ igwefoto dị mma, nke ahụ bụ ịsị na foto anaghị apụta ọka na agba ndị mara mma, mana ọ dị adị. Ajụjụ m buru ibu bụ na onye ọ bụla na-ekwu na igwefoto mbụ ma ọ bụ nke abụọ kachasị mma n'ụwa bụ Samsung S7, ị chere na ọ bụrụ na m ahọrọ Huawei p9 m ga-emechu ihu na ogo foto a? Enwere m xperia Z5, mana ọ bụghị dual sim na obere ọkụ foto tụkwasịrị m. ọka wit. M ga-enwe ekele maka enyemaka gị.
Google kwuputara Jamboard, nnukwu bọọdụ aka
Feint ndị niile na nnukwu anụ na-abịa n'ihi na ị na na fun na mara Dị nnọọ ọnyà